Fanaanad Sahro Axmed Jaamac oo ku geeriyootay Hargeysa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaFanaanad Sahro Axmed Jaamac oo ku geeriyootay Hargeysa
April 4, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Sahro Axmed Jaamac, oo kamid ahayd fanaantii hablaha ee ugu caansanaa Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ku geeriyooday magaalada Hargeysa, sida ay xaqiijiyeen qoyskeeda.
Sahro ayaa la sheegay in maalmihii u dambeeyay ay ku xanuunsaneyd gurigeeda kuyaala magaalada Hargeysa, waxay kamid ahayd kooxdii fanaaniinta Waaberi ee Soomaaliya.
D’adeeda ayaa la sheegay in ay ahayd 62-sanno jir.
Markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991, waxay tagtay UK halkaas oo ay muddo ku nooleyd kahor inta aysan kusoo noqon Hargeysa.
Waxay lahayd cod gaar oo danana, waxayna ay aad ugu fiicneyn jiliinka iyada oo ka qeybgashay riwaayado badan. Heesaheedii kala duwanaa ayaa dad badan ku xasuusan doonaan.
Bulshada Soomaaliyeed ayaa warbaahinta bulshada tacsi u marisay marxuumad Sahro Axmed.